Lufthansa dia nanambara ireo toerana vaovao any Gresy amin'ny fahavaratra 2020
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Lufthansa dia nanambara ireo toerana vaovao any Gresy amin'ny fahavaratra 2020
Lufthansa dia nanambara toerana roa vaovao ho an'ny fahavaratra 2020
Masoandro, morontsiraka ary ranomasina: Gresy dia toerana itobiana malaza amin'ny mpanao fialantsasatra maro. Ary manomboka amin'ny fahavaratra 2020, Lufthansa dia hanolotra fomba roa hafa handaniana ny fialantsasatra any atsinanan'ny Mediteraneana: Miaraka amin'i Zakynthos avy any Munich sy Rhodes avy any Frankfurt, nampiana nosy vaovao roa manintona. Amin'ny fahavaratry ny taona 2020, dia hanolotra mpandeha noana rehetra sun-sun ka hatramin'ny 14 fifandraisana isan-kerinandro amin'ny nosy dimy grika i Lufthansa ankoatry ny sidina mankany Athens sy Tesalonika. Mihoatra ny hatramin'izay.
Vaovao avy any Munich amin'ny antsipiriany
Zakynthos no anaran'ilay toerana itodiana vaovao avy any Munich, izay ho eo amin'ny fandaharam-panidinana voalohany amin'ny 4 aprily 2020. Lufthansa dia manidina any amin'ny nosy any andrefan'i Gresy isaky ny asabotsy miaraka amin'ny Airbus A321. Ny LH1762 dia miainga avy any Munich amin'ny 14:45 ora ary miakatra ao Zakynthos amin'ny 18:00 ora. Ny sidina LH1763 sidina miverina dia mitondra ny fialantsasatra hiverina any Munich amin'ny 19:00 ora. Ny fipetrahana amin'ny 20:25 ora dia mety amin'ny fampifandraisana sidina ao an-trano sy any ivelany. Ny fifandraisana isan-kerinandro amin'i Zakynthos dia hanampy amin'ny 3 Jona. Avy eo ny Airbus A320 dia hiainga isaky ny alarobia amin'ny 15:45 ora ho any Gresy.
Vaovao avy any Frankfurt amin'ny antsipiriany
Manomboka amin'ny 4 aprily, i Lufthansa dia hisidina indray mandeha isan-kerinandro avy any Frankfurt mankany Rhodes any atsimo atsinanan'i Gresy. Isaky ny sabotsy dia misy Lufthansa Airbus A320 miaraka amin'ny laharan'ny sidina LH1258 miainga ho any Gresy amin'ny 1 ora tolakandro isan'andro. Ny fipetrahana any Rhodes dia voalahatra ho amin'ny 17:10 ora. Ny sidina fiverenan'i LH1259 dia hiainga amin'ny 18:10 ora, kasaina amin'ny 20:30 ora ny fipetrahana any Frankfurt. Manomboka amin'ny 6 Jona ka hatramin'ny 15 septambra dia hisy serivisy isan-kerinandro hanampy. Rhodes dia ho hita isaky ny talata. Amin'ny 12:10 ora no fiainganana.